Pochettino oo sheegay kooxda ugu cad cad ee ku guuleysan karta Champions Leaque… (Liverpool mise Real Madrid?) – Gool FM
Dajiye May 28, 2022
(Paris) 28 Maajo 2022. Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino ayaa tilmaamay fursada ay Real Madrid ku hanan karto Champions Leaque-ga oo ay Liverpool kaga guuleysan karto.
Mauricio Pochettino ayaa qeexay in qalbigiisa uu u janjeero kooxda cad cadka ah ee Real Madrid, inkasta oo aanu u ciyaarin isla markaana aanu hore tababare ugu noqon.
Tababaraha kooxda Paris Saint-Germain ayaa dhibane u noqday Real Madrid, kaddib markii PSG kaga ciribtireen wareega 16-ka ee tartanka Champions Leaque-ga, kahor inta aysan Los Blancos ka badinin Chelsea iyo Manchester City markaas kaddib.
Tababaraha reer Argentine ayaa qiimayntii uu ku sameeyay isku diyaarinta labada kooxood kahor kulanka finalka ee caawa, wuxuuna yiri:
“Real waxa ay la dhibtooneysaa cadaadis yar, wayna degan tahay si ay isugu diyaariso finalka, sababtoo ah Liverpool waxay ahayd inay ciyaarto finalka koobka FA Cup, oo ay u tartanto horyaalka Premier League ilaa dhammaadka.”
“Qalbigeygu wuxuu aadayaa dhanka Real Madrid finalka Champions League.”
“Way iska cadahay in maanta qalbigeyga uu la jiri doono cad cadka, sababtoo ah markii aan imid Espanyol, macalinkeygii ugu horeeyay wuxuu ahaa Jose Antonio Camacho, oo igu beeray jaceykan aan u qabo Real Madrid.”
“Waxa aan u malaynayaa in Real Madrid ay tahay kooxda ugu cad-cad hanashada tartankan, Liverpool waa koox weyn, laakiin Real Madrid waxa ay haysataa koobab badan, waxaana leedahay taariikh iyo awood mar walba ka dhigta kuwa ugu cad-cad ku guulaysiga finalka.”
Marka laga hadlayo cidda go’aamin doonta finalka, tababaraha Paris Saint-Germain ayaa yiri:
“Benzema waxa uu soo maray xilli ciyaareed heersare ah, waana weeraryahanka ugu fiican adduunka, waxa uu wajihi doonaa Salah iyo Mane, oo ah ciyaaryahano muhiim ah, una dagaalami doona guushaas, laakin Benzema wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto dadaalkiisa xilli ciyaareedkan, waan arki doonaa waxa dhaca.”